Dhaqaalaha iyo Siyaasadda | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Posts in category Dhaqaalaha iyo Siyaasadda
Dowladi waxa ay dakhliyo kala duwan ‘different income’ ka heshaa ilo kala gedisan ‘different source’. Dowladi ma shaqayn karto hadii aan dakhli jirin. Dakhliga na waxa ay ka heshaa dadka. Dowlad kasta oo dunida ka jirtaa dadkeeda waxa ay ka heshaa dakhli kala duwan oo ay ku socod siiso hawlaha qaranka (Implementation of national work). Dakhligu waa mishiinka dhaqaajiya shaqada dowlada, adeegyadda bulshada, iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Noocyadda dakhli ee dowlad soo gala guud ahaan waxa lagu soo koobaa toddoba qaybood; Dakhliga cashuuraha (revenue from tax). Dakhliga adeega (revenue from service). Dakhliga deeqaha (revenue from grants). Dakhliga hantida dowlada (revenue from …
Waa Maxay Suuqa Xorta Ah? Suuqa xorta ah ”waa erey lasoo koobay oo macnahiisa noqon kara isweydaarsi’ oo bulshada dhexdeeda ah. Isweydaarsi kasta waxaa loo fuliyaa sidii heshiis ikhtiyaari ah oo u dhexeeya laba qof ama u dhexeeya kooxo dad ah oo wakiilkoodu matalayo. Labadan shaqsi (ama wakiilo) ayaa isdhaafsada laba badeecadood oo dhaqaale ah, ama badeecooyin la taaban karo ama adeegyo aan la taaban karin. Tusaalle, markaan iibsado joornaal wargeys ah oo konton senti oo shillin Soomaali ah, wariyaha iyo aniga waxaan isdhaafsanaa laba baddeecadood: Waxaan dhiibaa konton senti oo shillin Soomaali ah, wariyaha iibiyana wuxuu iska dhigayaa wargeyska. …
Dhaqaalaha Soomaaliya waxa uu xoog ugu tiirsan yahay ganacsiga (heavily depend on trade) si gaara badeecadaha la soo dejiyo (imported goods), xoolaha, xawaaladaha iyo isgaadhsiinta. Alaabaha ganacsi ee la soo dhoofiyo waxay ka tahay GDP-ga 40% halka waxdhoofinta ay tahay 10%, waxa cad in Soomaaliya ku jirto isu-dheelitirnaan la’aan dhaqaale (imbalance economy). Aragti dhaqaale oo dalalka ay ka hirgashay yihiin kuwa ladan ayaa ah “Export product should be greater than the import commodities” oo micnaheedu tahay marka dhaqaalaha waddanka laga hadlayo si dhaqaalaha wadanku u kobco marwalba waa in waxa aad dhoofisaa ka badan yahay waxa aad soo dhoofsanayso. Aynu …
Wadamadda qaaradda Africa kuma taagna qoton dhaqaale oo adag, waxa ayna wajahaan dhaqaale burbur markasta oo xaalad cakiran oo dhaqaale dunida ka dhacdo. Wadamadda adduunka waxaa ka dhexeeya oo isku xidha dhaqaalahooda ganacsi wadhoofinta iyo soodejinta, adeega macaamiisha, maalgashiga, socodka lacagta, dadka iyo macluumaadka. Sanadkan 2020 Afrika waxa ay wajahaysaa hoos u dhac dhaqaale Covid 19 dartiis. Warbixin sanadle ah oo Bangiga Hormarinta Afrika daabaco sanad walba ayaa koboca dhaqaalaha Afrika 2020 lagu sheegay in uu kor u kici doono 3.9%, halka 2019 uu ahaa 3.4% iyada oo sanadka 2021 la rajaynayo +4.1%. Koboca dhaqaalaha 2020 waxa saacidaya ayaa lagu …
Waa maqaal falanqaynaya sababta uu Islaamku saamiga dhaxalka hablaha uga yareeyay saamiga ragga. “لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ” (سورة النساء: ١١). Maxaa ka jira in dhedignimadu ay dhaxalka naaqusiso?! Maxaa se ka fahansan tahay ayaadan kor ku xusan?! Dhowrkan mas’alo ila daraasee, deetana natiijada soo baxda aynu wada aragno: Qof ayaa ka dhintay hanti dhan $12,000 iyo dhaxal-qaatayaal kala ah: wiil, hooyo, iyo wiil wiilki dhalay: Hooyo: $2,000 Wiilka: $10,000 Wiilka wiilkiisa: $0 Mas’aladan waxaa ku jira laba wiil oo dhaxal qaatayaal ah, labada wiil mid wuu ka qaday dhaxalkii, mid na wax buu dhaxlay, sababtu waxay tahay maydka ayay u …
Saddexdii bilood ee u dambeeyay dunida, sayladaha saamiyadda adduunka, dhaqaalaha caalamka, iyo badeecadaha ganacsi waxaa saameeyay xanuunka Korona Fayras. Khubarada dhaqaalaha ayaa dhamaantood sheegaya in dunidu wajahayso hoos u dhac weyn oo dhaqaale iyo dhaqaale burbrur sababta fiditaanka Covid 19 awadeed. Xanuunka Korona Fayras oo bishii December 2019 laga helay gobolka Hubei, magaaladiisa Wahun ee Shiinaha ayaa farabaas ku haya caafimaadkii, ganacsigii iyo dhaqaalihii. Covid 19 dunida waxa uu ku keenay saamayn xun oo dhaqaale aadna u gun balaadhan. Waxa uu ku faafay waddamo badan ilaa 192 dal sida ay diwaangalisay ha’ayadda WHO bisha March 2020. Dhibaatada caafimaad ee uu …
Dhibaatooyinka ay Leedahay Daymaha ay Qaataan Dowladaha
Bukhaari Xirsi Faarax, March 30, 2020
Waa maqaal ka hadlaya caqabadaha iyo culaysyada dawlad ka soo wajihi kara dayn qaadashada. Mashiinka dhaqaajiya dawlad waa dhaqaale, si ay dawladdu u qabato wajibaadka horyaal, bulshadeedana ay usiiso adeegyada ay u baahan yihiin waa in ay dhaqaale haysaa ay wax ku kala socodsiiso, dhaqaalaha ay dawladdu maamulayso ayaa sameeya eray-bixinada dawladnimada ku sidkan ee aynu had iyo jeer maqalno, sidda dakhli, kharaj iyo miisaaniyad. Dhaqaaluhu wuxuu dawladda ku soo galaa habab kala duwan oo ay ugu horreeyaan canshuur qaadid, maalgalin, iyo dayn qaadasho. Dayn qaadashadu waa hab kamid ah hababka ay dawladuhu dhaqaale ku helaan. Dayntu caadi ahaan waa …
Cudurkaan korona fayrus wuxuu sidoo kale saameyn ba’an ku leeyahay suuqyada saliida iyo gaaska. Dadka uu ku dhacay cudurka korono fayrus guud ahaan caalamka ayaa Axadda maanta ah gaartay ilaa iyo 300,000 oo qof. Sida ay ku warrameyso wakaaladda wararka ee AFP, ugu yaraan 300,097 la xiriira caabuqaan halista ah ayaa la diiwaangeliyay aduunyada oo dhan, tan iyo intii uu soo billowday bishii December ee sannadki hore. Dadka u dhintay ee isbitaallada lagu diiwaangeliyay ayaa gaaraya 12,895 oo dhimasho ah, ilaa iyo 169 waddan oo caalamka ah, sida ay maanta xaqiijisay Hey’adda Caafimaadka Aduunka ee WHO. Dalka Talyaaniga ayaa hadda …